Ntoni Umthetho Ifemi Consultant Ukuzenza. Ukukhubazeka Umthetho Lentengiso - Zonke abaqondisi-mthetho ehlabathini! Isemthethweni rock kunye abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Zonke abaqondisi-mthetho ehlabathini! Isemthethweni rock kunye abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Ntoni Umthetho Ifemi Consultant Ukuzenza. Ukukhubazeka Umthetho Lentengiso
Baya kunika ukumelwa ngexesha inkundla kwaye mediations
Umthetho ifemi consultant yi exabisekileyo advisor bobabini isemthethweni consultant nabaqondisi-mthethoIsemthethweni abacebisi, nabaqondisi-mthetho kuba kakhulu efanayo iindima. Kubalulekile nkqu argued ukuba bawela kulo ngalinye nezinye ke, iindima. Zombini uza zoba phezulu amaxwebhu asemthethweni kwaye bobabini benze thorough uphando ukuba inzuzo yabo abaxhasi.
Ngabo eliphathiswe unxibelelwano kunye zabo abaxhasi
Nangona kunjalo, kukho ezinye neeyantlukwano phakathi a isemthethweni consultant kwaye lawyer. A isemthethweni consultant unako lokucebisa abantu, amashishini okanye organizations kunye wabo ngokusemthethweni okanye izibophelelo iingxaki. Baya kubonelela isemthethweni iingcebiso nge-thoroughly ephanda yakho imicimbi. Baya idrafti phezulu amaxwebhu asemthethweni ukuba ziyimfuneko ukuze umntu okanye umbutho. A isemthethweni consultant inikezela na afanelekileyo isemthethweni iingcebiso zabo abaxhasi kunye iqinisekisa ukuba zabo abaxhasi basemazweni ilungelo emi kunye nomthetho. A isemthethweni consultant enokuba iinkalo zobuchule kwi-ethile entsimini, ezifana iirhafu okanye real estate. Ngenxa izakhono zabo kwaye iinkalo zobuchule, isemthethweni consultant unako amele inkampani kwi eqhubekayo qho. Banako ukuqinisekisa ukuba akukho isemthethweni iintshukumo ingaba wabeka ngokuchasene inkampani okanye umbutho. Ngabo eliphathiswe idala kwaye analyzing isemthethweni amaxwebhu zabo abaxhasi. Baya kuqinisekisa ukuba ishishini okanye umbutho kuhambelana yonke ekhoyo nemithetho nemiqathango. Abaqondisi-mthetho amele kwaye ikhusele ilizwe labo abaxhasi kunye neenkqubo zomthetho kwakunye nemigaqo-nkqubo. Abo bamele kanjalo zabo abaxhasi ngexesha ishishini amalungiselelo ukuba involve isemthethweni iingxoxo. Indima a lawyer ngu basically amele zabo umxhasi nawuphi na kwaye yonke imicimbi enxulumene. Abaqondisi-mthetho musa nje kuvela kwinkundla kunye zabo abaxhasi, nangona ukuba ngomnye umba indima yabo. Kukho izinto ezininzi emva icandelo lomboniso umsebenzi ukuba iqhubeka kunye zonke i-amatyala ukuba a lawyer kuthatha njalo. A lawyer ngu-ofisi linoxanduva idala amaxwebhu asemthethweni. Benza imizamo yabo uphando lwenziwa njani ke isebenza meko selisondele. Baye ke buyisela nge bonke abo zihlanganisene ulwazi lwabo abaxhasi. Ewe, a lawyer limele zabo abaxhasi kwi inkundla kwaye isemthethweni mitigations, kodwa kukho okuninzi ngakumbi ukuba uyaya paha ityala phambi appearing in phambili umgwebi. Baya bamele kuwe kwaye lokucebisa kuwe ngexesha kuyo yonke inkqubo. Bamele kanjalo kukho ukuphendula nayiphi na complex imibuzo ukuze babe nalo. A lawyer unako kanjalo bathabathe kwi indima a isemthethweni consultant. I-ultimate umahluko phakathi isemthethweni consultant kwaye lawyer kukuba isemthethweni consultant izenzo njengoko i-advisor, ngeli lawyer unako kanjalo kunikela ukumelwa phambi ijaji. Inkqubo esemthethweni consultant iqinisekisa ukuba zabo abaxhasi ingaba isithethi ngaphakathi imithetho. I-lawyer ingaba oku ngokunjalo, kodwa banako kanjalo losapho ngenxa yabo abaxhasi phambi ijaji. kusenokuba ngumsebenzi exabisekileyo advisor bobabini abaqondisi-mthetho isemthethweni kwaye abacebisi. Baya lokucebisa umthetho firms kwi ishishini iindlela ezilungileyo kwaye yonke imicimbi eziphathelele umthetho ii-ofisi. Ngabo exabisekileyo ukuba abaqondisi-mthetho, isemthethweni kwaye abacebisi wonke abasebenzi ilungu kwi umthetho ifemi. Ingaba oku kwenzeke Ithetha ntoni umthetho ifemi consultant ntoni? Umthetho ifemi consultant oncedisa kwaye advises isemthethweni firms kunye zabo senzo. Bathabatha lonke ushishino kwi kwesigqibo, hayi nje lawyer ke umba. Baya kuncedisa kuzo zonke iindlela ezilungileyo ukusuka ngaphambili-ofisi ukuba iyabala kwaye ukususela umxhasi intake ukuba kunjalo yolawulo. Yenu yonke umthetho-ofisi ishishini baya kuxhamla umthetho ifemi consultant.
Wonke lawyer okanye isemthethweni consultant iimfuno elungileyo seshishini.
Umthetho ifemi consultant kuya kusinceda abaqondisi-mthetho yenza kakhulu kulo nyaka seshishini kuba zabo umthetho ifemi. Baya kuba ulwazi iinkalo zobuchule ukunceda ukuhlola iimfuno zomthetho-ofisi. I-ofisi kwaye wonke umntu kulo ukudlala crucial indima ebalulekileyo umthetho ifemi. Umthetho ifemi funda unako inzuzo wonke abasebenzi ilungu kwi-wonke indima yakho umthetho-ofisi. Baya kufundisa nabasebenzi bakho amalungu zibandakanya iindlela ezilungileyo ukuba nenzuzo i-intake lolwazi. Baya kuqalisa beneficial-ofisi umgaqo-nkqubo izicwangciso ukuba uza nefuthe kwishishini lakho kwi dibanisa hlobo. Umthetho ifemi consultant uza kufumana ukwazi wena yakho umthetho ifemi kwaye nokuchaza kwishishini lakho phambi komthetho ifemi ishishini advising. Baya uncedo ukuphucula yakho umxhasi intake izicwangciso.
Baya kanjalo lokucebisa nisolko kwindlela yakho meko ulawulo iindlela ezilungileyo.
Baya kukunceda ukuba ukusebenzisa olomeleleyo umxhasi unxibelelwano izicwangciso. Ukuba a lawyer ngu stumped yi-kunjalo okanye umcimbi kwi-kunjalo, umthetho ifemi consultant unako ukunceda. Baya kufumana amava ngaloo ezithile indawo Yabo amava kwi-isemthethweni ishishini ndiya kukwandisa inzuzo umthetho ifemi yayo, abaxhasi umthetho ifemi consultant sele iminyaka engama-ukuva ukuba tsala ukususela xa advising umthetho firms. Baya uncedo ngendlela ebalulekileyo kwaye beneficial nemigaqo-nkqubo kulo lonke lonke e-ofisini.
Uncedo ukuphuhlisa injongo yesicwangciso-ucwangciso ukuba inzuzo umthetho ifemi ke ishishini iindlela ezilungileyo.
Zedijithali Umthetho Lentengiso LLC ibonelela iindleko ngobuchule lentengiso izicwangciso kunye ukusebenzisa i-TV izibhengezo, SEO kwaye PPC Re-lentengiso Programmatic ad ukuthenga iinkonzo.
KWI-INTANETHI ABAQONDISI-MTHETHO JIKELELE IKLOKO
ADVOKAT FÖR GRATIS
© 2021 Zonke abaqondisi-mthetho ehlabathini! Isemthethweni rock kunye abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.